Ukuphunyuka kwezwe elikude esigodini esiluhlaza saseTasmanian
Ikhaya lomndeni eliyingqayizivele, ukuguqulwa kwethu kweshede kunakho konke ukusebenziseka kwesimanje okubekwe kumahektha angama-25 anepulazi elingavundile elineGunns Plains Caves neWings Wildlife Park eziqhenya ngeqoqo elikhulu kunawo wonke lezilwane zasendle zaseTasmanian nje imizuzu emihlanu ukusuka.
Kukhona izindawo eziningi zokuhamba zasehlathini ezikhazimulayo kanye nezindawo zokushayela, okuhlanganisa i-Cradle Mountain kanye nokubukwa kwe-platypus ngasemfuleni wethu. Ilungele abathandi bemvelo abafuna ukuzola noma ukuzijabulisa.
Sidizayine futhi sakha ukuguqulwa kweshede lethu, ngakho yonke into ozoyithola ngaphambi kokuthi ukhethwe ngokukhethekile ngenhloso yokwakha ikhaya lomndeni eliphelele, elibonisa ubulula nobuhle bemvelo bendawo ezungezile eyingqayizivele.
Leli gumbi lingamamitha-skwele angu-56 futhi lithatha yonke indawo yesibili yekhaya, linombhede olingana nendlovukazi onethezekile kanye neqoqo elikhulu le-DVD ongalibuka kumabonakude wakho elinendawo eningi yokuphumula. Zizwe ukhululekile ukupheka ikhishi elimiswe kahle futhi ujabulele indawo ezungezile ngamafasitela amakhulu anokubukwa kwesigodi sethu esihle.
Siphinde sibe nelinye igumbi esiliqasha nge-Airbnb elibizwa ngokuthi Igumbi Eliyimfihlo esigodini uma kwenzeka kudingeke elinye igumbi lomndeni wakho noma abangani.
4.84(270 okushiwo abanye)
I-Gunns Plains iyindawo engcwele evundile futhi eluhlaza, egxilile emvelweni wendawo. Hamba phakathi kwezihlahla ezinkulu zezinsini futhi ngeke kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuba ubone inqwaba yezilwane zasendle; ama-sugar glider, ama-platypus, ama-echidna, ama-quoll, ama-wombat, amalulwane, izikhova, izinkozi, oklebe, amadada asezintabeni futhi lokho ukukha nje ezimbalwa!
Indawo ekahle emaphakathi ezindaweni ezizungezile ezikhangayo njenge-Cradle Mountain, amabhishi amahle namadolobhana ezimakethe ezixakile, imigede yasendulo namapaki ezilwane zasendle.
Imizuzu engama-40 ukuya esikhumulweni sesikebhe sase-Devonport.
Ngenkathi siya emsebenzini usuku ngalunye, ngokuvamile sifika kusihlwa siyajabula ukuthi usijoyine noma sijabule ngokulinganayo ukukunikeza indawo yakho.